Amplitude: Mobile Analytics yeDecision Makers | Martech Zone
Amplitude: Mobile Analytics yeDecision Makers
Muvhuro, September 16, 2013 Muvhuro, September 16, 2013 Douglas Karr
Amplitude iri nyore nhare yekushandisa analytics chikuva chevanogadzira kuti vabatanidze. Ipuratifomu inosanganisira chaiyo nguva yekuongorora, yekudyidzana dashibhodhi, chengetedzo neboka, pakarepo anodzoreredza funnels, munhu wega mushandisi nhoroondo uye data kunze kwenyika.
Nyanzvi, bhizinesi uye bhizinesi zvirongwa zvakare zvinosanganisira kuongororwa kwemari, chikamu chevashandisi, mibvunzo inogadziriswa, kushambadzira chinongedzo analytics, yakanangana nekuwana dhatabhesi uye kusangana kwetsika zvichienderana nepakeji iwe yaunosaina.
Kubatanidzwa neAplitude kunongoda tambo imwe chete yekodhi muapp yako. Paunenge wabatanidzwa, unenge uchiteedzera zuva nezuva, vhiki nevhiki, uye vashandisi vanoshanda pamwedzi, zvikamu, kuchengetedza, mhando dzemidziyo, chikuva, nyika, mutauro, shanduro yeapp, nzvimbo, uye nezvimwe zvese zviri mubhokisi. Wedzera mutsara wekodhi kuti uteedzere zvimwe zviitiko mukati memusangano.
Amplitude Kuchengetedza Kuzivisa:
Tags: amplitudefaneli yekubikamobile analyticsnharembozha app analyticsmobile app chengetedzonhare yekushandisa analyticsmobile application chengetedzochengetedzo yekuzivisa
Conferize: Usatombopotsa Musangano
Spigit: Kuronga Innovation